Gabadh iyadoo 13 jira Hadiyad “Abaalmarin” ahaan loo siiyey Nin aaney garaneyn,Maxaase dhacay | Qaran News
Gabadh iyadoo 13 jira Hadiyad “Abaalmarin” ahaan loo siiyey Nin aaney garaneyn,Maxaase dhacay
Writen by Qaran News | 3:39 am 23rd Sep, 2021
Gabadh iyadoo 13 jira Hadiyad “Abaalmarin” ahaan loo siiyey Nin aaney garaneyn,Maxaase dhacay!
13 jir anigoo ah ayaa la igu daray nin aanan garaneynin
Caasha Ake waa gabar hadda 26 jir ah oo xaas soo ahayd muddo 13 sano ah. Waxa ay sheegtay in iyadoo 13 jir ah loo aroosiyay nin abaalmarin ahaan looga dhigayay, oo iyadu ay hadiyad ahayd.
Guud ahaan waqtigii guurkeeda waxay arrintu la ahayd riyo keliya, sababtoo ah ma aysan ogeyn sida ay wax u dhacayeen.
Waxa ay kasoo jeeddaa mid ka mid ah bulshooyinka oggolaada in gabdhaha lagu guursado da’ aad u yar. Guurka carruurta sharci darro ayuu ka yahay dalka Kenya.
“Waa la i guursaday. Maadaama aan ahaa carruur, xitaa ma aanan fahansaneyn waxa ninkeyga uu u baahan yahay, sidoo kalena ma garaneynin mas’uuliyadda qoyska, run ahaantiina, ilmo ahaan ka ahaa ninkeyga dhankiisa,” ayay tidhi Caasha.
Qaabkee loo guursaday iyadoo gabadh yar ah?
Caasha, oo dhalasho ahaan kasoo jeedda magaalada Moyale ee waqooyi-bari Kenya, waxa ay sheegtay inay ku soo kortay Guriga eeddadeed oo uu aabbeheed qabay, taasoo loo geeyay iyadoo 2 sano jir ah.
“Markii aan gaaray fasalka shanaad, oo aan qorsheynayo inaan usii gudbo fasalka lixaad, ayaan ka war helay arrinta oo dhan. Xilligaas ayaan gartay in aan xiriir xun la lahaa xaaska aabbeheey, sidaas darteed waan awoodi waayay inaan si fool ka fool ah ula hadlo iyada aana kala sheekeysto arrimaha i dhibayay,” ayay tiri Caasha oo dib u xasuusaneysa marxaladdaas.
Waxaa lagu khasbay in ay u safarto ilaa magaalada Moyale, inkastoo aabbeheed uu kasoo horjeeday in lagu guursado da’ yar
Haweeneydan waxay BBC-da u sheegtay in markii ay halkaas xaaladdu mareysay ay soo wacday aayadeed ayna u sheegtay inuu jiro nin guurkeeda daneynaya.
“Waad xasuusataa dadkii nasoo booqanayay, iyo ninkii dhallinyarada ahaa ee la socday, waxay sheegeen inay ku soo doonayaan si uu wiilka kuu guursado,” hadalkaas ayay tiri haweeneydii uu aabbeheed qabay ee soo korsatay.
“Aad baan u argagaxay, mana garaneynin wax aan sameeyo, sidaas darteedna kama soo horjeedsan karin, su’aalna ma keeni karin. Waan iska aamusay anigoo wadnaheyga uu aad u garaacmayo.”
Waxay ahayd intii u dhaxeysay 2006 ilaa 2007, nolosheediina waxay durbadiiba gashay isbaddal, maadaama ay aqal gashay iyadoo 13 sano kaliya jirta.
Waqtigaasoo dhan Caasha waxay sheegtay in aabeheed uu ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Nairobi.
Waxaa lagu khasbay in ay u safarto Moyale, inkastoo loo sheegayay in aabeheed uu kasoo horjeeday in la guuriyo iyadoo sidaas u da’ yar.
Hase yeeshee, soddohdeed ayaa qoyska u ballan qaadday inay xaqiijin doono in gabadhu ay dhammeysato waxbarashadeeda, nolol fiicanna ay ku noolaan doonto.
Xushmadda ka dhaxeysay labada qoys awgeed, Caasha waxaa loo guursaday si rasmi ah.
Arrinta layaabka leh waxay ahayd in gabadha yar aysan wax aqoon ah u lahayn ninka ay xaaska u noqoneyso, sababtoo ah bulshadooda dhexdeeda caadi ayay ka ahayd in haweeney uu guursado nin aysan garaneynin.
“Sanadkii 2006, waxaan isku diyaarinayay inaan dhammeeyo fasalka toddobaad ee dugsiga dhexe si aan ugu biiro fasalka siddeedaad oo marka aan ka baxo ay ii dhammaan lahayd waxbarashada aasaasiga ah.”
Waxay ahayd hal isbuuc ka hor inta uusan dhicin arooska markii gabadha loo qaaday meel ay bulshadeeda hablaha u geeyaan si loogu diyaariyo arooska.
Laakiin waxyaabahaasoo dhan Caasha waxay ku ahaayeen layaab.
Maadaama ay caado tahay in gabdhaha arooska galaya ay guriga joogaan maalmo ka hor xafladda guurka, gabadhan waxay sheegtay in muddadaasoo dhan lagu hayay meel ay ku xayirneyd.
Maalmihii ka horreeyay arooska, Caasha waxaa lagu hayay meel ay ku xayirneyd
Ma aysan arki karin saaxiibbadeed, kuwii ay u suurtagashay in ay arkaanna waxay ka salaamayeen daaqadda oo kaliya.
Waxay arrintaas ku micneysay in looga gol lahaa si aysan ula kulmin dad ka dhaadhicin kara in ay arooskaas diiddo.
Isbuucaas waxa uu u ahaa mid murugo badan, sida ay u shegtay BBC-da.
Toddobo maalmood kaddib waa la guursaday waxaana loo wareejiyay magaalada Marsabit, oo dhowr kiiloomitir u jirta magaalada Moyale oo ay ku nooleyd arooska ka hor.
“Waxaa la i aqal geeyay anigoo 13 jir ah, ninkeyguna sidoo kale wuu yaraa, sababtoo ah markaas unbuu soo dhammeeyay fasalka afaraad ee Dugsiga Sare, sidaasna waxaa ku ahaa hadiyaddiisa abaal marinta loogu siinayay inuu dhammeeyay iskuulka,” ayay tiri.
Ninka loo guuriyay Caasha laftiisa waxa uu ahaa wiil yar oo markaas dhammeeyay dugsiga sare
Sida ay Caasha sheegtay, ninkeeda waxa uu iyada guursaday ka hor inta uusan helin natiijada imtixaanka Dugsiga Sare.
Habeenkii ugu horreeyay ee Aqal Galka
Maadaama aysan is aqoonin labadoodaba, way adkeyd inay gogol wadaagaan.
“Waxaan gaaray heer aanan waxba kala garaneynin, waxba kama aqoonin arrinta socotay, waan iska oynayay mar walba, xitaa haddii aan baahanahay ama musqul rabo ma sheegi karin, waayo waan argagaxsanaa.”
Caasha waxay sheegtay in aysan aaminsaneyn inay noqotay qof xaaskiis, iyadoo intaas ku dartay inay dareentay sidii in qoyskeeda ay u wareejiyeen reer kale oo koriya. Wax kasta waxaa sameyn jiray ninkeeda hooyadiis, sida cunto karinta, nadaafadda iyo waxyaabaha la midka ah.
“Xitaa ma aanan aqoonin sida wax loo kariyo, laga yaabaa inaan shaah ama qaxwo karin karo, balse wax kale ma aqoonin, waligey kuma fikirin inaan isku diyaariyo xaasnimo,” ayay tiri Caasha.
Dhowr bilood kaddib arooska, gabadhii yareyd waxay yeelatay uur. Markii la gaaray xilliga dhalmadana, Caasha si caadi ah uma aysan dhali karin, waxaana lagu khasbanaaday in la qalo.
Intii uu socday qalliinka, waxay gashay miyil beel ay ku jirtay 10 maalmood. Nasiib darro, cunuggii ay dhashay wuxuu dhintay saacado yar kaddib.
Asha says that her husband joined the university and began to have different unusual dynamics
“Markii aan soo miyirsaday, waxaan arkay dad igu hareereysan, waan naxay, waxaana weydiiyay meesha cunugeyga la geeyay, balse waxay ii sheegeen inuu i macsalaameeyay cunugii, waan ooyay, mana aqoonin wax aan sameeyo,” ayay tiri iyadoo sharraxeysay marxaladdaas.
Dhowr maalmood kaddib, Caasha waxaa lagu celiyay guriga, si looga baxnaaniyo dhaawicii qalliinka.
Hase yeeshee nolosheeda waxay isbaddal billowday saddex sano kaddib.
2009-kii waxay yeelatay uur kale, wayna dhashay. Muddadii ay guriga joogtay oo dhan ma aysan rumeysneyn in ay tahay nin xaaskiis, shaqada oo dhanna waxaa qaban jiray soddoggeed iyo soddohdeed.
Iyada iyo ninkeeda waxyaabo badan ayay isku khilaafi jireen, maadaama labadoodaba ay maskaxdooda ahayn mid aan qaangaar ahayn.
1397 Vistors Online